रुघा खोकीको घरेलु उपचार, कतै तपा‌ईलाई कोभिड त भाको छैन- जानकारी !! | सुदुरपश्चिम खबर
अहिले रुघाखोकी लाग्नसाथ मान्छेमा ड’र पैदा हुन्छ । उनीहरु आफैमाथि शं’का गर्न थाल्छन्, ‘कतै को’रोना त लागेन ?’ कोरोनाको सुरुवाती वा साझा ल’क्षण हो, रु’घाकोखी । धेरैजसो अवस्थामा रुघाखो’की त्यती ज’टिल मानिदैन । केही समयपछि यो आफै निको हुन्छ । रुघाखो’कीले सताएमा प्रशस्त ता’तो पानी, झोलयुक्त पदार्थ खाने र आरम गर्ने हो । यति भएपछि औषधि उपचारको जरुरत पर्दैन । यद्यपि बुढापाका, रो’गी र बालबच्चालाई भने अलि बढी नै स’ताउने जोखिम पनि रहन्छ ।
चिसोको कारण उनीहरुलाई नि’मोनिया हुने ख’तरा रहन्छ । त्यसैले जा’डो सुरु भएसँगै केही सा’वधानी अपनाउन जरुरी छ । रुघाखो’की लाग्नसाथ औ’षधि खोज्ने प्रवृत्ति पनि धेरैको हुन्छ । तर, सामन्य रुघाखो’कीमा घरेलु ओ’खती नै काफी हुन्छ । त्यसैगरी रुघाखो’की लागेको बेला ता’तो पानीको बाफ लिनु सर्वोत्तम हो । यसले बन्द ना’क खुल्छ, फो’क्सोलाई पनि फाइदा गर्छ ।
बेला बेलामा ता’तो पानीको बाफ लिएमा रुघाखो’कीको स’मस्याबाट चाडै छु’टकारा पाइन्छ । यससँगै केही यस्ता ओ’खति पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो तपाईं–हाम्रो घरमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ । जस्तो कि, तुलसी पानी । तुलसीको केही पातलाई पानीमा उ’मालेर से’वन गर्नुपर्छ । तुलसीको पात चपाउँदा पनि हुन्छ । त्यसो त तुलसी अन्य सम’स्याहरुमा पनि उपयुक्त हुन्छ । जाडोमा अक्सर रुघाखो’कीसँगै ज्व’रो, नि’मोनिया, ब्रो’न्काइटिस, गलाको सम’स्या, फो’क्सोको सम’स्या हुनेगर्छ ।
यस्तो अवस्थामा तुलसीको सेवन उपयोगी हुन्छ । तुलसीको प्रयोगले छा’तीमा चि’सो लाग्न पाउँदैन । यदि चिसो लागेको छ भने पनि क’फ निकाल्छ । छा’तीको दु’खाई पनि कम गर्छ । स्वास प्रणालीको झिल्लीमा स्वा’स्थ्यप्रद प्रभाव पार्न तुलसीमा अद्भूत क्षमता हुन्छ । अदुवा, मरिच र तुलसीको मिश्रणको चिया पिउनुपर्छ, स्वा’स्थ्यमा निकै फाइदा गर्छ । तुलसीको चिया बनाउनका लागि पात चाहिन्छ । त्यसलाई सुकाएर चूर्ण बनाउनुपर्छ । त्यसमा राम्ररी पिसेको मरिचको चाहिन्छ ।
सुख्खा अदुवाको धुलो मिसाउनुपर्छ । अब यो मिश्रणलाई तातो पानीमा उमाल्नुपर्छ । राम्ररी उम्लिएपछि पाँच मिनेटजति ढक्कनले छोप्नुपर्छ । त्यसमा एक सय ग्राम जति शख्खर हालेर सेवन गर्नुपर्छ । यसले चिसो लागेको, टा’उको दुखेको, ना’क बन्द भएको, पि’नास, श्वा’स न’ली बन्द भएको सम’स्यामा ठीक गर्छ ।यसैगरी मह र तातोपानी ।
मह मिसाएको तातो पानीले रु’घामा धेरै राहत दिन्छ । त्यसैगरी बेसार र दुध । एक गिलास तातो दुधमा एक चम्चा बेसार मिसाएर पिउनुपर्छ ।अदुवाको रस महमा मिसाएर खाएमा पनि खोकी टाढा भाग्छ । तपाईलाई रुघाखोकीले सताएको छ भने राती सुत्नभन्दा अगाडि दुध वा चियामा अदुवा उमालेर पिउनुहोस् । तर्पाको स्वा’स्थ्यमा छिटै सुधार हुन्छ । अलैंचीलाई चियामा उ’मालेर पिउनाले रुघाखो’की ठीक हुन्छ ।
हरेक घरको भान्सामा पाइने यी खानेकुरा, जसले बढाउँछ रोगसँग लड्ने क्षमता !!
सृष्टी श्रृंगारका प्रबन्धक भट्ट द्वारा महाकाली अस्पताललाई सहयोग हस्तान्तरण